Sida loogu dhejiyo fiidiyow si deg deg ah Mac | waxaan ka imid mac
Qolka Ignatius | | Barnaamijyada Mac, Tababarada
Fiidiyowyada qoysku waa kuwo aan dhib lahayn, marka laga reebo marka ay iyagu yihiin. Qofna ma jecla inuu booqdo saaxiib si ay u arkaan dhammaan sawiro iyo muuqaalo aad qaaday fasaxaadii u dambeeyay. Marka fiidiyowyadan annagaa iska leh, haddii aan rabno inaan sameyno muuqaal kooban, waa inaan daawanaa saacado iyo saacado (waxay kuxirantahay tirada fiidiyowyada aan duubnay) si aan u helno nuxurka aan rabno inaan wadaagno.
Si aan hawshan uga dhigno mid aad u fudud, oo wax kasta ka dheereeya, sida ugu fiican ee aan sameyn karno waa in aan ku dhejino fiidiyowyada kamarada degdega ah, si aan si fudud u helno waqtiga saxda ah ee aan rabno in aan ku darno ururintayada. Hadii aad rabto inaad ogaato sida loo dhigo video in mooshin degdeg ah on Mac, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
Dhinac ay tahay in aan xisaabta ku darno marka fiidiyowyada la gelinayo dhaqdhaqaaq degdeg ah waa ujeedada. Taasi waa, haddii aan rabno in aan dedejinno fiidiyowga oo kaliya si aan u helno xilliga aan rabno inaan ku darno ama haddii, liddi ku ah, waxaan rabnaa inaan dedejinno fiidiyowga oo aan u badbaadinno sidan oo kale, taas oo ah, la dedejiyey.
Fiidiyow dhaqdhaqaaq degdeg ah ayaa dhalin kara, marar badan, daqiiqado majaajillo ah taas oo xawliga caadiga ah, aan macno iyo nimco midna lahayn, haddaba haddii aanad ka fikirin doorashadan, waa inaad xisaabta ku dartaa.
3 Cute gooyo
Mar labaad waa inaan ka hadalnaa iMovie, tifaftiraha fiidiyoowga bilaashka ah ee Apple, haddii ay tahay inaan ku shaqeyno fiidiyowyada. Iyadoo iMovie, ma dadajin karno oo kaliya dib-u-ciyaarista fiidiyowyada, laakiin sidoo kale waxaan badbaadin karnaa fiidyaha la dedejiyay inuu ku ciyaaro ciyaaryahan kasta.
iMovie noo ogolaadaa wax ka beddel xawaaraha fiidiyowyada, loo yaqaan clips ee abka, si madaxbanaan. Taas macnaheedu waxa weeye, ma aha lagama maarmaan in la beddelo xawaaraha dib-u-ciyaarista si madax-bannaan oo fiidiyoow kasta ah, dhoofin oo lagu daro fiidiyowga kooban ee aan samaynayno.
Haddii aan rabno inaan wax ka beddelno xawaaraha dib-u-ciyaarista ee clip-ka iMovie, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa dooro clip-ka su'aasha.
Marka xigta, liiska xulashooyinka ayaa la soo bandhigi doonaa, menu kaas oo noo ogolaanaya inaan ku sameyno hawlgallada tafatirka fiidiyowgaas. In menu in, waa in aan dhagsii astaanta muujinaya cabbirka-xawaaraha oo muujinaya magaca Speed.
Markaas menu cusub ayaa la soo bandhigi doonaa. In menu in, in doorashada Xawaare, waa inaan ku ciyaarnaa goobaha kala duwan ilaa aan ka helno xawaaraha saxda ah ee aan raadineyno.
Dhammaan isbeddellada aan samayno waa la rogi karaa, in kasta oo aan badbaadinay mashruuca, si aan isku dayi karno dhammaan xulashooyinka na xiiseynaya si aan u awoodno inaan dardargelinno ama hoos u dhigno dib-u-ciyaarista fiidiyowga.
Markaad fiidyaha si degdeg ah u ciyaareyso, iyadoo ku xiran xawaaraha la doortay. maqalka lama fahmi karo. Xaaladahan, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno waa codka ka saar muuqaalka. Waxa kale oo aan habkan ku samayn karnaa iMovie anagoon adeegsan codsiyada dhinac saddexaad.
Sida aan kor ku soo sheegay, isbeddelladani waxay saamayn doonaan oo keliya clip-ka la doortay ma aha mashruuca oo dhan.
Codsigan sidoo kale eWaxaa diyaar u ah iPhone iyo iPad labadaba, oo leh shaqo isku mid ah, markaa haddii aad ku duubto iPhone, waxaad si toos ah u dardar gelin kartaa fiidiyowyada mobilada adigoon u wareejin Mac-gaaga.
Mar labaad waxaan ka hadalnaa VLC, sida aan had iyo jeer idhaahdo, ciyaaryahan video ugu fiican ee suuqa mid kasta oo ka mid ah moobilada iyo miisaska miiska ee suuqa, ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay ku habboon tahay mid kasta oo ka mid ah qaababka, laakiin sidoo kale sababtoo ah waa gebi ahaanba bilaash ah oo furan.
VLC waa isku mid. Marka laga soo tago in ay noo ogolaato in aan ciyaarno fiidiyoow ama fayl muusig, waxa kale oo ay ku daraysaa hawlo dheeraad ah sida awoodda in laga saaro maqalka fiidyaha, soo dejiso fiidiyowyada YouTube...
Marka la eego fursadaha dib-u-ciyaarista, VLC ayaa noo ogolaata dedeji dib-u-ciyaarista muuqaalka, inkasta oo aanaan u dhoofin karin natiijada fayl sida haddii aan ku samayn karno iMovie, sidaas darteed codsigan ayaa ku habboon in laga helo fiidiyowyada fiidiyowyada aan duubnay oo aan rabno inaan ku darno muuqaal kooban.
para Dadaji dib-u-ciyaarista fiidiyowga iyada oo loo marayo VLC, waa inaan fulinaa tillaabooyinka aan hoosta kugu tusinayo:
Marka aan furno fiidiyowga codsiga ama codsiga, waxaan aadeynaa menu-ka Taranka laga helo xagga sare ee arjiga.
Liiskan dhexdiisa, waxaanu ka raadinaynaa ikhtiyaarka Xawaare oo dooro Degdeg ama Dhakhso (sax ah). Doorashadan ugu dambeysa waxay noo ogolaaneysaa inaan hagaajino xawaaraha dib-u-ciyaarista si uu u ahaado mid dhakhso badan ama u gaabis ah.
Waad awoodaa soo dejiso vlc gabi ahaanba bilaasha ah macOS iyada oo loo marayo isku xirkaan
Tifaftir kale oo fiidiyoow ah, kaas oo aan sidoo kale uga hadalnay Soy de Mac hore oo aan u isticmaali karno in aan wax ka beddelo fiidiyowyada haddii Mac-keena uusan ku socon iMovie waa Cute Cut, waa Cute Cut. Codsigan, oo ah nooca bilaashka ah, wuxuu noo ogolaanayaa inaan wax ka beddelno xawaaraha dib-u-ciyaarista fiidiyowyada.
iMovie waxay u baahan tahay macOS 11.5.1 si ay ugu raaxaysato dhammaan hawlaha ay bixiso, si kastaba ha ahaatee, waan awoodnaa soo deji qoraaladii hore Kombiyuutarada ay maamulaan noocyadii hore, laakiin leh xad.
Haddii kooxdaadu ay jiraan dhowr sano, in ka badan toban sano, tusaale ahaan, waxay u badan tahay in ma soo dejisan karo iMovie in midna versions ay.
Cute Cut, wuxuu u shaqeeyaa sida OSX 10.9, sida aan ku arki karno sharraxaadda, nooc ka mid ah oo la bilaabay in ka badan 20 sano ka hor suuqa.
para wax ka beddel xawaaraha dib-u-ciyaarista fiidyaha oo leh Cute Cut, waa inaan fulinaa tillaabooyinka aan hoosta kugu tusinayo:
Si loo dedejiyo ama loo gaabiyo dib-u-ciyaarista fiidyaha Cute Cut, waa in aan, sida iMovie, dooro track video in aan rabno in aan dardargelino.
Marka xigta, waxaan u soconaa midigta sare ee barnaamijka, halkaasoo dhammaan hagaajinta aan ku samayn karno clip-ka la doortay lagu muujiyo.
Qaybtan, raadi dooraha soo bandhigay ag erayga Xawaaraha una dhaqaaq dhanka midig si aad u kordhiso xawliga ciyaarista.
Sida iMovie, oo leh Cute Cut waxaan wax ka beddeli karnaa xawaaraha dib-u-ciyaarista ee fiidiyow kasta ama clip kasta hab madax banaan, iyada oo aan saameyn ku yeelan muuqaalka oo dhan.
Xaddidaadda aan ka helno nooca bilaashka ah waa in aan awoodno oo keliya wax ka beddel fiidiyowyada dhererkoodu ugu badnaan yahay 60 ilbiriqsi iyo in calaamad-biyood ku jirto.
Cute CUT - Filim Sameeyahafree
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo dhejiyo fiidiyow si degdeg ah u dhaqdhaqaaqa Mac
27-inch iMac soo socda waxay yeelan doontaa guddi LCD ah oo aan lahayn miniLED marka loo eego DigiTimes